RASMI: kulanka Real Madrid iyo Athletic Bilbao ee horyaalka La Liga oo la baajiyay – Gool FM
RASMI: kulanka Real Madrid iyo Athletic Bilbao ee horyaalka La Liga oo la baajiyay
Dajiye October 13, 2021
(Madrid) 13 Okt 2021. Gudiga sare ciyaaraha ee dalka Spain ayaa xaqiijiyay in dib loo dhigay labada kulan ee Real Madrid iyo Athletic Bilbao, Atletico Madrid iyo Granada toddobaadkan, sababo la xiriira isreeb -reebka Koonfurta Ameerika ee Koobka Adduunka.
Los Blancos ayaa mar hore codsatay in dib loo dhigo, sida Barcelona ay samaysay kulankeedii Seville, sababa la xiriira kordhinta kulammada isreeb -reebka Koobka Adduunka ee FIFA ee qaaradda Laatiin, taas oo ka hor istaagi doonta ciyaartoyda South America inay ka qeybgalaan kulammada kooxahooda.
Gudiga sare ciyaaraha ee dalka Spain ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen:
“Dib u dhigistan ayaa la codsaday iyadoo ay sabab u tahay FIFA oo kordhisay muddada kulammada caalamiga ah ee isreeb-reebka Koonfurta America, waxayna tani saamaynaysaa kooxaha ay tahay inay ciyaaraan Jimcaha iyo sidoo kale kuwa ciyaari doona kulamada Champions League. Talaadada. October 19. “
Sidaas darteed, waxaa jira 4 ciyaarood oo dib loo dhigay, waxaa la baajiyay kulankii Seville iyo Barcelona, ​​iyo sidoo kale ciyaartii Villarreal ee Alaves, marka lagu daro kulanka Real Madrid ay la ciyaari doonto Athletic Bilbao, sidoo kale Granada iyo Atletico Madrid, iyada oo xiriirka kubadda cagta Spain uusan go’aamin taariikhda la ciyaari doono kulammadan dib loo dhigay.
Waxaa xusid mudan in Real Madrid ay hoggaamineyso kala sarreynta horyaalka La Liga, iyada oo leh 17 dhibcood, waxayna ku dhibco tahay kooxaha Atletico Madrid iyo Real Sociedad, laakiin Los Blancos ayaa hoggaanka ku heysa farqiga goolasha.
Halyeey reer Uruguay ah oo kula taliyay Cavani inuu ka tago Manchester United
Jorge Mendes oo ku sugan magaalada Barcelona si uu wada-hadallo ula billaabo naadiga Barca... (Waa kee heshiiska uu ka shaqeynayo?)